Sezvo teknolojia inoshanduka nokukurumidza, kufarira kwevanhu kunoshanduka nekukurumidza. Mitambo yekutengesa ndeyechokwadi mumwaka. Nzvimbo dzakawanda dzekutengesa nzvimbo zvino dzinopa vhesi yemabhuku nekuda kwekuda kwayo. Mamwe mabhuku emitambo anongoda kusarudza yemitambo yakakurumbira asi kutungamirira mitambo yemitambo inosanganisira mimwe mitambo yakasiyana senge American nhabvu, Baseball, Basketball, Rugby, Soccer, Tafura tenesi, Tennis uye Volleyball, Bhokiseni, Cricket, kuchovha, Darts, Gorofu, Handball, Ice hockey, uye Motor mutambo. Nhabvu yemitambo yave chiitiko chekuvaraidza chevatengesi pasi rese. Panzvimbo pekungotarisa yavo yavanofarira timu, ivo vanogona kunzwa zvakanyanya kubatanidzwa mumutambo nekubheja. Uye kana timu ivo yavari rooting yekuhwina, ivo vanokunda zvakare – maererano nema bitcoins. Nekushandisa Bitcoin, vanozvikurisa pachavo neropafadzo yese Bitcoin mitambo yekubheja nzvimbo dzinopa.
Zvinyorwa zvemitambo zvinogona kutarisa zvakafanana asi zvinoda kuve zvakasiyana nevamwe vose. Mitambo yekutengesa yakave yakakurumbira zvokuti nzvimbo dzekutengesa dzinofanirwa kuendesa mitambo yavo kuitira kuti ionekwe. Zvakakosha kuti vaite nzvimbo dzavo dzekutarisa-kubata kuti vakweke vanogona kubhadhara. Vazhinji Bitcoin mitambo yekutengesa nzvimbo vakapedza kuita kudaro, asi zvakaoma chaizvo kumira pamusana pemakwikwi akasimba. Mimwe yematambo makuru ekutengesa nzvimbo paItaneti ndiwo Nitrogen Sports, 1xBit, Cloudbet, Betcoin Sports, Sportsbet.io, Directbet, uye Bovada. Imwe yehutano dzose idzi nzvimbo dzakafanana ndeyekuti vose vanobvuma Bitcoin sokubhadhara sarudzo.
Kuva neBitcoin sekubhadhara kuri nyore kwazvo pane kubhadhara kuburikidza newaya yekubhangi yekutamba mitambo. Kuishandisa zvinoreva mabhaisikopu epapo uye kubvisa vatengesi. Bitcoin mitambo yekubheja masaiti haibvunze chero simbiso kana uchibhadhara muBitcoin, zvinoreva kuti bhalansi yako inogadziriswa ipapo ipapo. Mari dzacho dzakaderera zvakanyanya, dziine shoma kune pasina mubhadharo zvachose. Mabhuku emitambo anogona zvakare kupa iwo makakatanwa akakwirira nekuti ivo vanogona zvakare kuzvidzivirira kubva kubhangi mareji. Nekuda kweizvi, mimwe mitambo yemitambo yekubheja inogumira yavo yekubhadhara nzira kune Bitcoin chete. Pamwero uyu, Bitcoin mitambo yokubheja haazombofi yakarongeka.